Ny minisitra Bartlett hitsidika ny Minisiteran'ny TD Jakes any Texas
Home » Vaovao momba ny fitsangatsanganana » Ny minisitra Bartlett hitsidika ny Minisiteran'ny TD Jakes any Texas
Febroary 12, 2020
Ny minisitry ny fizahantany Hon. Edmund Bartlett hitsidika an'i Texas amin'ny Alakamisy, hihaona amin'ny Eveka TD Jakes ao amin'ny fiangonany, ny Potters House, hijerena bebe kokoa ny fananganana ny vokatra mifototra amin'ny finoana ao Jamaika.
Izany dia taorian'ny fivoriana iray tany Jamaika tamin'ny volana novambra lasa teo, izay nanehoan'ny filoham-pinoana malaza fa liana amin'ny fivoriana an-tampon'ny mpitarika any Jamaika, izay mety hitondra mpitsidika 10,000 ho any amin'ilay nosy.
Ny fivoriana savaranonando niaraka tamin'ny Eveka dia natao tao Falmouth, raha ny Finoana an'i Jakes sy ny fianakavian-dry zareo mitsangantsangana eo amin'ny MS Nieuw Amsterdam tafapetraka amin'ny mpandeha hafa 1,800.
Ny fifanakalozan-kevitra dia nanjary nifanarahana ny fitsidihan'ny minisitra Bartlett ny tranon'ny Potter mba hampivelarana bebe kokoa ny fiaraha-miasa.
Ny fotoam-piangonan'ny Eveka TD Jakes sy ny toriteny evanjelika dia alefa amin'ny The Potters Touch, izay mandeha fivelovesof.com, ny Trinite Broadcasting Network, Fahitalavitra fialamboly mainty, ny Tambajotra Television Daystar ary Ny Network Network. Raha ny fahitana azy dia mijery mpijery 3.3 tapitrisa isan-kerinandro izy ireo.
Ny tranon'ny Potter dia fiangonana tsy miankina amin'ny fanjakana misy mpikambana 30,000 tarihin'ny Eveka TD Jakes, indroa asongadina eo amin'ny fonon'ny Time gazety amin'ny maha-mpitory tsara indrindra an'i Amerika ary iray amin'ireo evanjelika 25 mahery indrindra ao Amerika.
Alohan'ny fitsidihan'ny minisitra Jakes ny minisitra Bartlett dia hanatrika fivoriana any Miami miaraka amin'ny Florida- Caribbean Cruise Association (FCCA) amin'ny 12 febroary, hiresahana ireo hetsika vaovao ary koa hanomezana vaovao farany momba ny sehatry ny sambo fitsangatsanganana any Jamaika.
Hihaona amin'ny Filoha sy Tale jeneralin'ny Royal Caribbean International (RCL) ihany koa izy amin'ny 14 Febroary 2020.
Ny Tale Mpanatanteraka ao amin'ny Jamaica Vacations Ltd (JAMVAC) dia miaraka amin'ny Minisitra mandritra ity fitsidihana ofisialy ity. Antenaina hiverina any amin'ny nosy izy ireo amin'ny 14 Febroary 2020.